Amanqaku kaLexie Lu Martech Zone |
Amanqaku ngu Lexie Lu
U-Lexie Lu uyilo lwe-UX oluzimeleyo kunye nebhlog. Ugcina kunye newebhu yamva kunye noyilo lwe-UX kwaye uhlala enendebe kufutshane. Ubhala njalo Uyilo Roast kwaye inokulandelwa kwi-Twitter @iamfanlalisa.
Iingcebiso ezili-10 ezibalulekileyo kubathengisi beNovice
NgoLwesibini, Januwari 17, 2017 NgoLwesihlanu, Oktobha 2, 2020 Lexie Lu
Ke ukulungele ukusika amazinyo akho kwilizwe elikhawulezayo, elinomdla lokuthengisa. Ukuzikhuthaza ngaphandle kwamathandabuzo kubalulekile, kodwa kuya kufuneka ulamkele neengcebiso ezivavanywe ixesha kwaye uqonde ukuba ungazisebenzisa njani kwimisebenzi yakho nakwindawo osebenza kuyo. Qhubeka ufundela izikhombisi ezisithoba ezibalulekileyo eziza kukunceda ufumane, ukhule kwaye uchume ngelixa usenza kwishishini lokuthengisa. Yiba ne-Inquisitive-Ngalo lonke ixesha zama ukujonga iimeko, iitekhnoloji, kunye neendlela ezikhoyo ngenjongo